Ikhaya > nobufakazi
Thumela ubufakazi bakho lapha
UNksz Mascha Fujimoto Uthathe Umhlalaphansi
Arizona, USA Mashi 16, 2021
Seattle, e-USA Mashi 12, 2021
David Roper Umhlalaphansi we-IT Director
IBlythewood SC, e-USA ngoMashi 3, 2021
U-Antonis N. Onjiniyela Abathathe Umhlalaphansi
Patras, eGrisi ngoFebhuwari 27, 2021
e-automatyk ul. ILeśna 17C, 62-006 Gruszczyn Dec 23th, 2020
UVíctor Ramón RG Umsebenzi Wasekhaya
Leioa, Bizkaia, Spain Septhemba 30, 2020
Lucy Gold Usosayensi Osethathe Umhlalaphansi
EParis, eFrance ngoSepthemba 21, 2020
I-Texas, e-USA Septhemba 1, 2020
Bekufanele ngithumele umyalezo wokubonga inkampani yakho ngalokhu okuhle Datanumen Outlook repair umkhiqizo!
Bengisebenzisa olunye uhlelo ukuvumelanisa umbono wami (i-Companion Link) nefoni yami nohlelo olungasebenzi kahle futhi ngisula idatha yami entsha kukhompyutha yami nedatha endala efonini yami. Bengingenaso isipele sefayela lokubuka futhi bengikhungatheke kakhulu ukulahlekelwa izibuyekezo ezibaluleke kakhulu kumanothi. Ngichithe cishe zonke izinsuku ezimbalwa ngicabanga futhi ngithola indlela yokulungisa lokhu ngazo zonke izindlela (izinhlobo zangaphambilini, enye isoftware yokutakula, amanye amathiphu aku-inthanethi) futhi bekubonakala kungenakwenzeka, kepha ngenhlanhla ngithole Datanumen umkhiqizo futhi wakwazi ukulungisa / ukuthola kabusha i-lost amanothi! Ngokuba yibhizinisi elincane futhi ngidlula kwezinye zezikhathi ezinzima zokuphila ngangidangele kakhulu, ngidabukile, ngithukuthele lapho ngicabanga ukuthi idatha yami yokubuka ibhalwe ngaphezulu yilelo phutha futhi ikhungathekile ingenandlela yokuyibuyisa futhi ngijabule kakhulu ukuthola lokhu Datanumen program futhi ngiyisebenzele ukubuyisa idatha yami, iyamangalisa futhi isoftware ibinembile futhi kulula ukuyisebenzisa. Le yinkampani enhle kakhulu futhi ngifuna nje ukwazisa wonke umuntu ukuthi enza umehluko ezimpilweni zabantu zibe ngcono !!!
U-Alan Rudy Freedom Real
ILos Angeles, CA, e-USA ngoJulayi 17, 2020
IHouston, Texas, US Julayi 15, 2020
Kulungiswe elinye ifayela lami iMicrosoft elibekwe njengelikhohlakele Million ngiyabonga.
UCavan McDonald uthathe umhlalaphansi
ISt Albans. UK Julayi 9th, 2020
Umlingo omkhulu - ulungise ifayela i-scanpst.exe engakwazi ngisho nokuliqonda njengebhokisi leposi le-Outlook. Ngiyabonga ngomkhiqizo owesabekayo.
I-United Kingdom ngoJuni 2, 2020
Isoftware yakho ye-Exchange recovery iyamangalisa futhi isebenza njenge-champ. Ngiyabonga.
Kwangathi i-9th, i-2020
DataNumen ithuluzi lisebenze kahle, lenze umsebenzi ebengilidinga ukuthi lenze. Umkhiqizo + ngiyabonga.
Ngingathanda ukubonga DataNumen inc. ngosizo lwakho nesoftware yakho ewenzile umsebenzi wayo futhi yavumela umuntu ongenalwazi kakhulu ukuthola amafayela wakhe we-Outlook 2007 PST.
UPete M. Uthathe umhlalaphansi
IRomania ngo-Ephreli 22nd, 2020
Ithuluzi lakho libe nesandla ekutholeni yonke i-imeyili yomkami. Ngiyabonga kakhulu kuwe nethimba lakho lonke ngokusinikeza leli thuluzi elisindisa impilo nelisebenziseka kalula !!
UKen Mantey uthathe umhlalaphansi we-GE Lighting
IChesterland, OH, e-USA Agasti 8th, 2019
Isebenza kalula, okusho ukuthi iyamangalisa. Ngiyabonga kakhulu, ikakhulukazi ngoba uma kungenjalo bengizokwazi ukuthola ngokomzimba amafayela obekufanele ngiwavuselele, ngenxa yokukhiya kwamanje okuqukethe i-covid-19. Ngizosakaza izwi elihle kakhulu ngomlomo ngawe.
EMilan, e-Italy Mashi 16, 2020
Sawubona. Ngivivinya isoftware yakho ukulungisa i-database ye-sql. Ngemuva kokusebenzisa amathuluzi akho sengiyakwazi ukubona yonke idatha yami futhi 🙂
I-December 13th, i-2019
Ngithanda ukukubonga kakhulu ngokwenza kube lula ukuthola ibhokisi le-imeyili oselilibheka njengelost, ngesoftware yeDataNume Exchange Recovery.
Siyakuhalalisela DataNumen Ithimba!
Februwari 16th, i-2020
Ngiyabonga ngosizo lwakho! Ngihlabeke umxhwele kakhulu ngokuthi lokhu kusebenze kanjani.
ITexas, US Novemba 8th, 2019
I-APP ENKULU! SO NICE! NGIBONGA KAKHULU.
Septhemba 2nd, 2019
Ngiyabonga kakhulu ngosizo lwakho oluvulekile futhi ngiyabonga izimpendulo zakho ezisheshayo. Ngingancoma umkhiqizo wakho nakanjani.
Kwangathi 31, 2019
Ngibonga kakhulu. Ngempela, isisombululo sakho sokutakula okuqukethwe kwefayela le-MS Office yisona esingcono kakhulu engisivivinye kuze kube manje.
UTomasz Warmuz Umqondisi Wezobuchwepheshe uLandis + Gyr Poland Sp. z oo
IPoznań, ePoland Kwangathi 20, 2019
Ukubonisana kukaLuca DM Cogeor
I-Rome, i-Italy ngo-Ephreli 10, 2020
Bengifuna ukusho nje ukuthi ngiyabonga ngokunikeza lolu hlelo. Ngisanda kuyisebenzisa ukuguqula ngempumelelo enkulu OST file engivumela ukuthi ngithole ama-imeyili ayi-150 adukile.
Wenze umsebenzi omuhle, futhi ngijabule kakhulu.
Ngibona kakhulu. Ngiyethemba unakhoost usuku oluhle, nempelasonto evelele !!
I-Asheville, NC Meyi 10, 2019
Ngendlela, silwazisa kakhulu usizo lwakho. Senze isinqumo sokuthenga Datanumen Exchange Recovery Ithuluzi izolo, futhi enye yezinto ebesisekele isinqumo sethu kube isevisi enhle kakhulu yezobuchwepheshe oyinikezile ngenkathi sihlola.
EFrance ngo-Ephreli 23, 2019
Leli thuluzi lalisiza kakhulu! Ngizamile enye isoftware efanayo kepha lena yenza iqhinga lokuthola wonke ama-imeyili ami kusuka OST Ifayela.
Kwangathi 20, 2019
Bengifuna nje ukuthi nina bahamba phambili ...
Uyaziswa kakhulu! Manje sengingathola imininingwane yami yekhalenda ekusethweni okungalungile OST (bekufanele ngabe imininingwane yekhalenda ihlukaniswe yaba yi-pst esikhundleni sokufakwa ku- ost)
Ngiyabonga futhi futhi ube nosuku oluhle!
Lo mlayezo usebenza njenge-BIG NGIYABONGA ngethuluzi lakho elihle lokulungisa i-Outlook. Ikhasimende lami belinenkinga kagesi eminingi edale ukuthi i-Outlook pst yonakale. I-Scanpst ize nephutha elibhekisa ezinkingeni zediski. Ngiligogile leli phutha futhi ngenhlanhla ngakhubeka ngomkhiqizo wakho. Ngafaka ngasebenzisa ithuluzi elathatha amahora ama-2 ukuqeda. Umphumela waba i-Outlook esebenza kahle eyayisheshayo kakhulu kunakuqala! Ikhasimende lami seliphelile inyanga njengoba kuyi-akhawunti yebhizinisi ethembele kakhulu kwi-imeyili.
Ngiyabonga ngomkhiqizo omuhle, nakanjani ngizowuncoma kubo bonke engisebenza nabo ku-IT. Ngemininingwane yakho, imvelo imi kanjena:
I-pc yedeskithophu (imodeli endala ye-IBM) ene-dual-core cpu, i-4Gb ram, iWindows 7 professional ne-Outlook 2007. I-PST iseduze. 4.5Gb.
Sicela uqhubeke nomsebenzi omkhulu.
USteve IT Professional
ITheku, iNingizimu Afrika ngoFebhuwari 18, 2019
Ukululama okungenamthungo. Kuhle kakhulu
Reparador de tablas I-FoxPro, i-fantastico
Wena ugcine usuku lwami. Noma yini ebengiyidinga - ukuguqula nje 2 OST amafayela. Uhlelo lwakho kuphela olwenza lokhu. Ngibonga kakhulu!
EMoscow, eRussia ngo-Ephreli 29, 2019
Ucezu olukhulu lwesoftware. Yenza lokho ekushoyo, nangendlela enobungani ...
Uhulumeni Wesifunda waseRicardo Freitas Architect
I-Funchal, ePortugal ngoJulayi 27, 2019
Lesi isiqeshana esikhulu sesoftware. Ithole ukuthi iphukile OST file okokuqala bese livulwa okokuqala ku-Outlook 2019. Bengizame ezinye izingcezu ezintathu zesoftware yokulungisa ngaphandle kwempumelelo futhi besengizokwamukela iposi elidala bekungu-lost. Ngiyabonga izinqwaba DataNumen! 😊
UPeter Keating ex CIO, manje usethathe umhlalaphansi
Bohdan Sheretiuk Osewathatha Umhlalaphansi UMarketer SS-service
Lutsk, Ukraine Okthoba 27, 2019
I-Facile et Efficace
Izicelo zebhizinisi le-Abdellatif FAJR General Manager
ICasablanca Morocco Disemba 10, 2019
Ithuluzi elikhulu futhi lisebenza kahle kakhulu. Ithuluzi lokutakula iDatabase
UMandip Kanjiya CEO noMsunguli weHey Flyer http://www.heyflyer.com/
Ukuthuthukiswa kwe-MS Office kuphazamise ikhompyutha yami futhi bekufanele ngisuse futhi ngifake kabusha. Ngenqubo i-Outlook ayizange yamukele endala.ost file nami lost onke ama-imeyili ami agcinwe kuma-sub-folders (ikhompyutha yasendaweni kuphela). Lokhu kwehluleka okwenzelwe i-Outlook, hhayi ukudala kabusha amafolda amancane kuseva. Ngemuva kwamahora we-6 wokwethuka, ngithole isiza sakho futhi ngalanda isoftware, kungakapheli nemizuzu engama-30 konke bekukuhle futhi. Onke ama-imeyili aphephile futhi ayafinyeleleka.
I-Auckland, eNew Zealand ngoFebhuwari 18, 2019
Ngilayishe isoftware yakho yokulungisa umbono ngenxa yemilayezo yamaphutha engapheli mayelana nefayela lami le-outlook.pst elingavaliwe kahle ekusetshenzisweni kokugcina. Isoftware yakho isebenze kahle. Ifayela lami le-pst likhule lisuka ku-1.9gb laya ku-2.45gm ngo-'lost data 'ebitholakele futhi yafakwa ngokucabangayo kumafolda amabili' atholakele '(hhayi nje alahlwe ebhokisini) ukuze ngibhekabheke. Kuthathe ngaphansi kwemizuzu eyi-10 ukuthola ngokuphelele nokuskena izinto zeposi ezitholakele.
Ngiyaphinda futhi ngiyabonga ngokunikeza isoftware enhle kangaka eyenza lokho ekushoyo ukuthi ikwenza ngaphandle kwemikhawulo yokusetshenziswa kwangasese. Ngincoma leli thuluzi kubo bonke ibhokisi lamathuluzi labasebenzisi bekhompyutha.
Umsebenzisi wekhompyutha kaPeter Jones Home
I-Adelaide, e-Australia ngoJuni 27, 2019
Ucezu olukhulu impela lwesoftware oluphelele ngokuphelele futhi oludonsa ngokujulile ukuthola ukususwa kanye lost ama-imeyili. Ngikwazile ukuthola inani eliphakeme lemininingwane okungekho enye isoftware ebengiyisebenzisa ebingakwazi. Ngikwazise kakhulu ukukwazi ukusebenzisa lolu hlelo ngasese kungekho cost.
I-Auckland, eNew Zealand Agasti 23, 2019
Benginefayela lefayela lefayela ebelinamaphutha okulungisa, iwebhusayithi yakho ilungise igama lefayela ngemizuzu engu-6.
Lokhu kuhlukile futhi kuhle kakhulu.
UValentin Bogatu unjiniyela weFiziksi https://helpwithphysics.com
IRomania Septhemba 4, 2019
Umkhiqizo wakho wenze konke obekufanele ukwenze. Ukuthola ifayela lami le-imeyili kungisindisile.
Ngizobe ngincoma umkhiqizo wakho kunoma ngubani owudingayo, futhi nakanjani uma ngiwudinga, ngizowufaka kabusha.
Umkhiqizo omuhle kakhulu.
Umphathi we-Eric Seeds IT CabAmalebhu Ezobuchwepheshe www.cabal.com
Ngemuva kokushintshwa kwe-PC yami, bengidinga ukululama ukuze ngizisebenzisele ifayili elidala le-UST ngiliguqulela ku-PST. Phakathi kwama-softwares amaningi, ngithole i-DEXR.EXE ehambelana ngqo nenhloso yami. Ngenkathi i-UI ibukeka ilula kakhulu, i-DEXR ikwazile ukuthola wonke ama-imeyili wami, oxhumana nabo namaqembu engixhumana nawo angenamaphutha. Ngikhumbula kahle DATANUMEN ngekusasa njengeNkomba Yomkhiqizo yokutakula idatha.
I-Italy Mashi 7, 2020
U-Eugenio G. Bahamondes M.Ss. Unjiniyela Omkhulu Kagesi
INorTecnica Engineers Ltd. Iquique, eChile
UBrian Willis Freelance wokuhumusha nokuthuthukiswa kwewebhusayithi
Le software inhle ngokwedlulele. Ngikubonga kakhulu ngokusinikeza ithuluzi elibaluleke kangaka (DataNumen Outlook Repair v 1.2 okugcwele) okusetshenziselwa umphakathi. Ngazise uma ungahlinzeka ngamathuluzi ngento ethile engaphezu kwalokhu.
Izinhlelo zeMohammed Meeran DATEL & Software FZ LLC
Ababonisi beRyan Foote Nexus IT
IPark City, e-Utah, e-USA
Umkhiqizo omuhle kakhulu !! Bengingabaza kodwa kusanda kuthola isipele zip yengobo yami yomlando ye-imeyili futhi ngiguquliwe 🙂
ngiyabonga. Umkhiqizo usebenze kahle.
Ingabe uhlelo oluhle ngempela, kulabo bantu abalanda amafayela amakhulu we-sfx ku-inthanethi angumonakalo ngincoma le software! iyalungisa zip amafayela namafayela we-sfx muhle! kodwa ngicabanga ukuthi le software idinga ikhono lokulungisa rar amafayela nawo 🙁
URick Fayter Database Consultant
Eqinisweni ngithole isixazululo sakho emaminithini ayi-10 okuqala!
Noma kunjalo yize ekuqaleni bengicabanga ukuthi le yimali eningi ongayisebenzisa ohlelweni oluncane, DataNumen Access Repair uthole i-database yethu ngakho-ke manje ngijabule kakhulu
Noma yini eku-inthanethi
Wow software yakho guys is awesome I downloaded the trial software and it was able to show me all of the tables that I had in ngqo. Le sofware iyazamazama futhi yangisiza kakhulu.
inokulungiswa kahle kusengaphambili
Bengifuna ukukwazisa lokho DataNumen DBF Repair ukwazile ukuthola yonke idatha kusuka ku-ACT yethu! 2000 database.
UStephen Rice Production Director
ISacramento Magazines Corp.
UBill Hair My Computer Guy
UKevin Smith Electronics Designer, Umlimi, Ogesi, Umculi
I-Cleanscape Software International i-Albuquerque, i-NM, e-USA
E. Madsen Injiniyela Omkhulu
I-PIN Technology, Inc. ENew York, NY, eU.SA.
Siyabonga ngokubuyela kimi. Kusukela lapho ngithenge isoftware ngathola isixhumanisi sokulanda isoftware khona manjalo. Ngayifaka futhi yasebenza ngokukhazimulayo!
Ngiyabonga ngokwenza kwakho "DataNumen PSD Repair"Ngangineminyaka eyodwa endala
ifayela engilokhu ngilibambe kusukela ngo-2000
I-PhotoDeluxe, kunguqulo ye-PDD i-Photoshop ayikwazanga ukufunda.
Awazi ukuthi ngijabule kanjani ukubheka emuva, ukulanda, futhi ngempumelelo
qala kabusha isoftware yakho kuleli fayela elilodwa.
I-Hillsborough, NJ, e-USA
Siyabonga ngokufaka. Ngithole ukuthi ngenzeni okwamanje. I-alm etholakeleost konke i-l yamiost imeyili. Siyabonga ngomkhiqizo omuhle ...
Injiniyela Wezicelo zikaJustin Moss
I-Metton America, Inc. IHouston, TX, e-USA
Kulondolozwe i-Bacon yami! Ngiyabonga!
E-Atlanta, eGeorgia, eU.SA
Ngithole iDVDRom nge zipifayela le-ped pst. Ngikwazile ukuyikhipha futhi konke kusebenza kahle futhi.Ngifisa ukukubonga ngohlobo loxhaso oluhle kakhulu nalo lonke usizo onginike lona. Ukube bekungekho okwakho ne-AOR mhlawumbe bengingeke ngiyithole idatha esefayelini.
I-Woonst BVBA Geraardsbergen, eBelgium
U-Arthur J Wehlow Umphathi we-Express Accounting Solutions
Ngiyabonga kakhulu ngosizo lwakho - ngiyalujabulela kakhulu.
Isisebenzi eProcter & Gamble
Sawubona, ngiyabonga ngokuphendula. Ngikwazile ukuzihlunga ngokwami ​​kusukela nge-imeyili yokuqala, ngiyaxolisa kakhulu ngokuthi ngikukhathaze. I-BTW, thanda umkhiqizo.
Kungenzeka ukuthi ucacise indawo negama lefayela ngalinye kuthebhu yokulungisa iBatch? Lokhu sekuvele kungenzeka kuthebhu yokulungisa, lapho kucubungulwa ifayili elilodwa kuphela, kepha bekungaba lusizo ngempela uma kungenzeka ukuhlela imininingwane yefayela lokukhipha ngokulungiswa kwe-batch.
Umkhiqizo omuhle ngendlela! I-AOR isibuyise i-most wezinto ezivela kufayela elibaluleke kakhulu le-6GB PST. Imizamo yami yangaphambilini nge-SCANPST ithole kuphela i-500mb!
UMark Humphrey Network Manager
I-CB Richard Ellis Ltd eToronto, eCanada
DataNumen Access Repair ululama idatha eningi kunanoma yimuphi omunye umkhiqizo engiwusebenzisile. Kungisizile ukuthi ngigcine imininingwane eminingi ekhohlakele. Ngijabule kakhulu ukuthola lo mkhiqizo.
UMargaret Messick C.ostume Izinsiza Zokusungula
Ngemuva kokuchitha isikhathi esingaphezu kwamahora ayi-10 ngisebenza ukufundisa i-MS ukuthi inkinga ikuphi lapho ngithuthukisa i-Outlook 2010 yami eya ku-2013 kanye nokuzenzakalelayo kwe-mutiple.ost amafayela ngagcina ngiwashiyile. lapho bengitshela ukuthi abakwazi ukuvula okwangempela.ost ifayela. Ngibe senginombono ocacile wokuthi ngicwaninge ngokushesha.ost ukuguqulwa kwe-.pst kanye ne-boom - i-3.8GB yedatha ebiyigugu kakhulu kimi ibuyele ezandleni zami - konke lokhu ngemuva kokuxhaswa ngabakwa-MS top tier kwe-Outlook bethi abakwazi ukwenza lutho. Ngikude ne-computer geek kepha uma wazi okungaphezu kwe-tech support rep kufanele ubone ngokushesha ukuthi usenkingeni. Kuyasebenza...
Umsunguli weRJ Collins V360
ISan Diego, CA, eU.SA Meyi 15, 2015
Angibanga nankinga ngale nqubekela phambili evelele. Izwi kulabo bantu okungenzeka babenezinkinga ezithile. Uma ngabe 'iDathaNemen Rar Uhlelo Lokulungisa lwehluleka ukulungisa ifayili kwezinye izimo zama ukulilungisa kolunye umkhombandlela _ umkhombandlela ku-flash yangaphandle noma ku-hard-drive ungivusele imiphumela emihle kakhulu. Kungokwemvelo kuphela ukuthi kufanele ngikwenze lokhu, most yesikhathi isebenza kahle.
Isikhathi esedlule ngiyathenga Datanumen Outlook Repair futhi ngiyajabula ngayo, ngiyisebenzisa ukwakha isikhathi nesikhathi. Manje ngidinga ukuthola ama-imeyili asusiwe esixukwini sefayela le-NSF Lotus Notes. Bengicabanga ukuthi ungahle ube nomkhiqizo omuhle kepha maye awunalutho lwamaNothi weLotus. Yebo, njengoba wenza izinto kahle, kungani ungenzi i- a Datanumen Ukulungiswa kwe-NSF? Ozithobayo, uRoberto
Ngingajabula kakhulu ukushiya impendulo emuva mayelana nokubandakanyeka kwami ​​okuhle komkhiqizo wakho _ izeluleko ezithile maqondana nokwehluleka okungokwemvelo kwe-'DathaNewmen Rar Uhlelo Lokulungisa ukulungisa i- rar ifayela. Ngithola ukuthi lapho lokhu kwenzeka, impumelelo yokulungisa ifayela okukhulunywa ngalo ibilokhu ifinyelelwa ngokuyihambisa komunye umkhombandlela bese iphinda umsebenzi lapho _ uqobo kwi-flash yangaphandle noma ku-hard drive.
Uma udinga ukuvumela ukuhlolwa kwami ​​komkhiqizo nganoma iyiphi imininingwane yami ungavele uyilinganisele esifundeni _ 'United Kingdom'. Ngiyabonga
I-United Kingdom Sep 6th, 2014
Hawu nkosi yami, NGIYABONGA! Angikholwa ukuthi ukwazile ukukulungisa! Ngizamile ngokoqobo konke okunye - lokhu kuyamangalisa, futhi ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabonga futhi ngosizo lwakho! Ngiyajabula ukubhala ubufakazi uma ubudinga- akekho omunye umuntu okwazile ukulungisa lokhu !!
I-United States Sep 16th, 2015
Ngiyabonga Alan, Ukulungisa kusebenze almost ngiphelele ... bengingalindele lokho kahle. Ngiyabonga kakhulu. Helmut
ITübingen, Germany Sep 13th, 2018
Ngiyabonga kakhulu ngokusekela kwakho - kusebenze ngokwakha nje iphrofayili entsha.
IHouston, TX, eU.SA Meyi 23, 2018
Bengifuna ukuthi Ngiyabonga nge-software.
Ifayela lami ledatha ye-Outlook libonakala liyi-mostly fixed.
Bengidinga ukuhlola nokususa ithoni yokungenile kepha, ngicabanga, ngithole kabusha i-most kwedatha yami.
Angisoze ngazi ukuthi yini enginayo lost unomphela!
ENaperville, IL, e-USA Dec 4th, 2018
Ithuluzi lakho yilona elingcono kakhulu engikwaze ngalo ukulungisa ifayela lokufinyelela eyunivesithi ukuze lisetshenziselwe umuntu siqu futhi ngiyabonga
Umphathi weRichard Network uFixsa
ISanto Domingo, Dominican Republic Dec 30th, 2018
Uhlelo lwakho lubonakale lusebenza kahle njengoba ngikwazile ukufinyelela amafayela
kumawindi wokuhlola noma uhlelo lokugcina umlando.
Ngiyaphinda futhi, ngiyabonga ngosizo lwakho ngohlelo futhi ngizokwenza kanjalo
E-Australia ngoJanuwari 17, 2019
Ngiyabonga kakhulu ngosizo lwakho kanye nentshisekelo Awukaze ube nobunzima nganoma iyiphi indlela.
Ngeneliseke kakhulu. Ngincoma wonke umuntu. Ngifisa uqhubeke nempumelelo.
I-Ankara, iTurkey Jan 29th, 2019
I-Brownwood, eTexas, e-USA Agasti 13, 2014
Kuyabiza kodwa kwenze konke okuthembisiwe kufaka phakathi okunamathiselwe
Ngakho-ke lokho kubiza malini? Kunconywe kakhulu!
Umklami weBrock Croome
ENyakatho Vancouver, BC, Canada Novemba 1, 2015
Advanced Outlook Repair ilungise ngokuphelele i-19GB Outlook 2007 .pst enamafolda amaningi avela eminyakeni engaphezu kwengu-15. Yonakaliswa ngemuva kokucisha kanzima, futhi ayizange ivuleke, noma ikwimodi ephephile. Ngizwile ngethuluzi lakho kusuka ku- "chcw" ku-ExpertsExchange.com nasetafuleni lokuqhathanisa lamaphesenti wokulungisa phakathi kwamathuluzi Datanumen.isayithi. Ngangenza ikhophi ye-.pst, futhi ngazama ngenhlanhla nge-Microsoft scanpst.exe. Amathuluzi weqembu lesithathu ayesizile eminyakeni eyedlule nge Outlook Express ukuguqulwa ngakho ngabheka online. Advanced Outlook Repair bekunguye kuphela othola ukubuyekezwa okuvumayo ngamacala ayinkimbinkimbi, futhi akhombise izibonelo zalokho, ngakho ngithole isigqebhezana ngasithenga. Ukudlula kokuqala kuthi ifayili lasekuqaleni beligcinwe livulwe ngomunye umthombo (yize liqaliswe kabusha). Ngibe sengizama ngiphikisana nekhophi, futhi kungakapheli imizuzu (cishe ama-20%), i-Outlook yami ivuleke - ngamafolda nama-imeyili aphelele. Kwangethusa ngoba ngangicabanga ukuthi ngithinte okuthile ngakuvala. Ngemuva kwemizuzu embalwa, lokho
IHouston, TX, e-USA uNovemba 1, 2015
EMelbourne, e-Australia ngoJanuwari 1, 2017
I-Disk Image yeqe ezinye izinhlelo ezintathu zobuchwepheshe ezingaphumelelanga ukudala isithombe sohlelo lwe-ISO - lena isebenze kahle. Yize ingeke yethulwe kusuka ku-USB futhi kufanele iqhutshwe kusuka ku-OS esebenzayo, ibishesha, i-1TB ngamahora angaphezudlwana kwama-2 ukuhlangana, futhi ibuyise ngokungenaphutha. Ngamandla okusebenza kwayo, ukuncipha kwayo, kanye nokwesekwa okuhle abakunikeze, ngingancoma isoftware yabo kunoma ngubani obedinga.
UWayne Rice Uthathe Umhlalaphansi
Bostku, MA, e-USA ngoJanuwari 25, 2017